News under मनोरञ्जन
काठमाडौँ ।&nbsp; गायिका शान्तिश्री परियारको नयाँ गीत &lsquo;न्याय मरेको देश&rsquo; सार्वजनिक भएको छ। राजेश पौडेलको शब्द रहेको गीतमा दिनेश मुस्कानले संगीत भरेका छन्। यसको म्युजिक भिडियो विना श्रेष्ठले निर्देशन गरेकी छिन्। ्भिडियोमा महिलाहरुमाथि हुने विभिन्न हिंसा बलात्कार, एसिड आक्रमण र छाउपडी प्रथा सम्बन्धि घटनालाई मार्मिक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ । लोकप्रिय...
काठमाडौँ ।दुई फिल्म घोषणाको लामो समय वितिसक्दा पनि नायिका रेखा थापाको फिल्म जीवनले गति लिएको छैन् । उनले केही समय अघि रेनेशा राईको निर्देशन रहने &lsquo;आइ एम ट्वान्टी वान&rsquo; को घोषणा गरेकी थिइन् । जसको लागभग ८० प्रतिशत सुटिङ पनि सकिएको छ । अर्को फिल्म सवीर श्रेष्ठको निर्देशनमा बन्ने खबर...
'मिस तामाङ २०२१ 'का लागि आवेदन खुला
काठमाडौँ । एभरेस्ट फेसन होमले आयोजना गरेको १३औं संस्करणको मिस तामाङ २०२१का लागि आवेदन खुला गरिएको छ । आवेदनका लागि 'एभरेस्ट फेसन होम' , पुतलीसडकमा सम्पर्क गर्नु पर्ने छ । तामाङ भाषा, धर्म, कला, संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज र रहनसहनलाई तामाङ युवामाझ पु&yen;याउने उद्देश्यले विगत २००९ देखि यो प्रतियोगिता सञ्चालन गरिदै...
गोपनियता नियन्त्रण गर्न टिकटकले ल्यायो नयाँ फिचर, कमेन्ट सेक्सन नै डिसेबल
काठमाडौँ । टिकटकले युवा समुहलाई मध्यनजर गरी आफ्ना केही फिचर फेरबदल गरेको छ । टिकटकले १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरुको अकाउन्ट बाइ डिफल्ट प्राइभेट बनाउने बताएको छ । जसकारण युवा उमेर समूहको टिकटक अकाउन्ट अझ धेरै गोप्य बन्ने भएको छ । प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो भिडियो कसले हेर्ने र कमेन्ट गर्ने...
पहिलो दिनमा नै मास्टरले कमायो ४० करोड, फिल्म बक्स अफिसमा सुनामी
काठमाडौँ । एक्सन थ्रिलिङ फिल्म &lsquo;मास्टर&rsquo; बुधबार रिलिज भएको छ। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय र विजय सेतुपति अभिनित फिल्मले पहिलो दिननै भारी सफलता हात पारेको छ । कोरोना कलमा रिलिज भएका सम्पूर्ण फिल्मलाई पछि पार्दै &lsquo;मास्टर&rsquo;ले पहिलो दिन नै विश्वभरबाट ४० करोड रुपैयाँ कमाएको हो । लोकेश कनागराजको निर्देशनमा बनेको फिल्म...
कौन बनेगा करोडपति छोड्दै अमिता
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले &nbsp;भारतीय टेलिभिजन रियालिटी शो &lsquo;कौन बनेगा करोडपति १२&rsquo; को अन्तिम एपिसोडको छायांकन सकाएका छन् । उनले आफ्नो ब्लगको अन्तिम एपिसोडको छायांकनबारे लेख्दै आवाकशको कुरा समेत समेटेका छन् । छायाँकनको अन्तिम दिन निकै लामा भएको भन्दै उनले अब आफू थाकि सकेको र रिटायर्ड भएको बताएका छन्...
‘दि भ्वाइस अफ नेपाल३’को कोचमा तृष्णाको इन्ट्री
काठमाडौं &ndash; रियालिटी शो &lsquo;दि भ्वाइस अफ नेपाल&rsquo;को सिजन ३ मा एक जना कोच परिवर्तन गरिएको छ । सिजन २ मा कोचको रुपमा रहेकी गायिका आस्था राउतले यो बर्ष समय दिन नभ्याएपछि उनको स्थानमा गायिका तृष्णा गुरुङलाई कोचको रुपमा अनुवन्धित गरिएको हो । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो कुराको जानकारी...
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन– ३ मा तृष्णा गुरुङ
काठमाडौँ । सिङगिङ रियालिटी सो &lsquo;द भ्वाइस अफ नेपाल&rsquo;को सिजन ३मा कोचका रुपमा तृष्णा गुरुङले प्रवेश गरेकी छन् । यस अघि&nbsp; सिजन&ndash; २मा कोचका रुपमा आस्था राउत, दिप श्रेष्ठ, प्रमोद खरेल र राजु लामा रहेका थिए । जसमा हाल फेरबदल भएर आस्थाको स्थानमा तृष्णा आएकी हुन् । ७ जनाको नाम भ्वाइसको...
फिल्मको पटकथा सुनाउन डिसेम्बर ३१ गतेदेखि शाहरुखको घर बाहिर निर्देशक
काठमाडौँ । बलिउडका लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान विगत तीन दशकदेखि कलाकारितामा सक्रिय छन्। ५५ वर्षिय शारुखको लोकप्रियताको ज्वालन्त उदारण अहिले प्रस्तुत भएको छ । भारतीय संचारमाध्यम पिंकभिल्लाका अनुसार, बेंगलुरुका एक फिल्म निर्देशकले उनलाई आफ्नो फिल्मको पटकथा सुनाउन उनको घर बाहिर &lsquo;धर्ना&rsquo; दिएर बसेका छन्। निर्देशक जयन्थ सिंजले सन् २०२० डिसेम्बर ३१ गतेदेखि...
शुक्रबार रिलिज हुन लागेको ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को ट्रेलरले कति आकर्षीत गर्ला दर्शकलाई ?
काठमाडौं &ndash; रिलिजको ३ दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक गरिएको चलचित्र &lsquo;एउटा यस्तो प्रेम कहानी&rsquo;को ट्रेलरमा नायक शिव श्रेष्ठको एक्सन र गीत मात्र समावेश गरिएको छ । तर, चलचित्रको ट्रेलरमा कलाकारको संवाद समावेश गरिएको छैन । लकडाउनपछि रिलिज हुन लागेको पहिलो नयाँ नेपाली चलचित्र भएकाले पनि यसप्रति चलचित्र क्षेत्रकै आशा जोडिएको छ...
काठमाडौँ । नेपाली फिल्म &lsquo;लप्पन छप्पन&ndash;२&rsquo; चार भाषामा रिलिज हुने भएको छ । फिल्म नेपाली, हिन्दी, तमिल र भोजपुरी भाषामा एकसाथ रिलिज गर्न लागिएको हो । निर्माण युनिटले फिल्मको एक पोष्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्म फागुन २७ गते रिलिज हुने जानकारी दिएको हो । मुकन्द भट्टको निर्देशन रहेको यस फिल्ममा सौगात मल्ल,...
फ्यानले जुराइदिए अनुष्का र विटारकी छोरीको नाम
भारत । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र क्रिकेट खेलाडी विराट कोहलीले सोमबार पुत्रीलाभ गरेका छन् । योसगै परिवारमा खुशीको माहोल छ । फिल्म र क्रिकिट दुवै क्षेत्रका फ्यानको सौभाग्य पाएका यो जोडीको निजि जीवन धेरैको चासोको विषय पनि हो । यस्तैमा अहिले उनीहरुका प्रशंस्कले छोरीको नाम समेत जुराइदिएका छन् ।आमा र...
एक क्रिकेट टिम जति बच्चाको चाहानामा प्रियंका
काठमाडौँ । कति बच्चा भन्ने प्रश्नमा अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले दिएको जवाफले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । उनले &nbsp;बेलायती म्यागजिन सन्डे टाइम्ससग कुरा गर्दै आफूले पूरै क्रिकेट टिमजति बच्चा चाहेको बताएकी छन्। २०१८ मा अमेरिकी पप गायक निक जोनससँग विवाह गरेकी प्रियंकाले भनिन् &lsquo;मलाई बच्चाहरु चाहिन्छ । जति हुन सक्छन् त्यति बच्चा...
कपि राइट उल्लंघन गरेको आरोपमा बिन्दवासिनी म्युजिककी अध्यक्ष लिना पक्राउ
काठमाडौँ&ndash; बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालिकी अध्यक्ष लिना शर्मा रेग्मी पक्राउ परेकी छन् । प्रतिलिपि अधिकार (कपि राइट) उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनलाई सोमबार प्रकाउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । गायक प्रमोद खरेललगायत केही कलाकारहरूले आइतबार परिसरमा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनमा अध्यक्ष रेग्मीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीको...
प्रति भिडियो एक लाख लिदैँ आएका पलले बढाए पारिश्रमिक
काठमाडौँ । नेपाली सिने क्षेत्रका व्यस्त नायक तथा मोडल पल शाहले म्युजिक भिडियोमा लिँदै आएको आफ्नो पारिश्रमिक बढाएका छन् । उनले प्रति म्युजिक भिडियो एक लाख रुपैयाँ लिँदै आएका बढाएर डेढ लाख पुर्याएका हुन् । पछिल्लो समय उनी म्युजिक भिडियोमा सर्वाधिक रुचाइएका तथा पहिलो रोजाइका मोडल हुन् । मुजिक भडियोमा धेरै नायकहरुले...
‘तिम्रो मेरो साथ’ को छायांकन सुरु, पुष्प र साम्राज्ञीको मुख्य भूमिका रहने
काठमाडौँ । अभिनेता पुष्प खड्का र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मुख्य भूमिका रहने फिल्म &lsquo;तिम्रो मेरो साथ&rsquo; को छायांकन थालिएको छ ।रमेश एमके पौडेलको निर्देशनमा रहेको यस फिल्मको छायांकन सोमबारदेखि थालिएको हो । फिल्म प्रेम कथामा आधारित हुने निमार्णकर्ताको भनाई छ । साथै फिल्ममा निर्देशक पौडेललको कथा तथा लगानी रहनेछ । साथमा...
धुम ४मा चोरको भूमिका निभाउदै दीपिका
काठमाडौँ । चर्चित बलिउड फिल्मको सिरिज &lsquo;धूम ४&rsquo; मा भिलेनका रुपमा अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले अभिनय गर्ने फाइनल भएको छ । जबकि, यसअघि रणवीर सिंह र शाहरुख खान खलनायकको रुपमा रहने चर्चा हुने गरेको थियो । &lsquo;धूम ४&rsquo; मेकर्सले मन बनाएका छन् कि, पहिलोपटक यो सिरिजमा महिला कलाकारलाई खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने...
सुहानालाई उत्कृष्ट डेब्यू नायिका अवार्ड
काठमाडौँ । नायिका सुहाना थापालाई उत्कृष्ट डेब्यू नायिकाको अवार्ड प्रदान गरिएको छ । १२औँ राष्ट्रिय बक्स अफिस अवार्ड २०२० मा थापालाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो। उनको पहिलो चलचित्र &lsquo;ए मेरो हजूर ३&rsquo; नै सफल भएको थियो। जसले छोटो समयमै सर्वाधिक भ्युज पनि कमाएको थियो । सो चलचित्रमा उनको अभिनय सबैले...
डिशहोममा कोरियन सिरिज नेपाली भाषामा हेर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपालमा नै पहिलो पटक डिसहोमको च्यानल नं. १०२ रियालिटी टिभीमा नेपाली भाषामा कोरियन सिरिज प्रशारण हुँदैछ । नेपाली युवा पुस्ताबिच सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको ब्राइड अफ दी सेन्चिुरी नामक सिरिज रियालिटी टिभी डिशहोमको बेसिक प्लस प्याकेज देखि उपलव्ध गराईएको छ । पुस २७ गते सोेमवार देखि हरेक सोमबार वेलुकी ८ः३० वजे...
'ए मेरो हजुर ३' को रेकर्ड तोड्दै ‘छक्का पञ्जा ३’ ले राख्यो नयाँ रेर्कड
काठमाडौँ । १७ दिन अघि युटुबमा रिलिज भएको &lsquo;छक्का पञ्जा ३&rsquo; ले युटुवमा नयाँ रेर्कड कायम गरेको छ । दिपाश्री निर्रौला र दिपकराज गिरीको समुहले निमार्ण गरेको यस फिल्मले 'ए मेरो हजुर ३' को रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । यस फिल्मलाई एक करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यति...
दुर्गेशको अभिव्यक्तिले भारतिय मिडियामा तरंग
काठमाडौँ । कार्यक्रमका लागि आसाम पुगेका गायक दुर्गेश थापाको अभिव्यक्तिले अहिले भारतिय मिडियामा तरंग नै ल्याइदिएको छ । हुन त सिमाको कुरा आउदा भारतका मिडिया तात्नु कुनै नौलो कुरा हैन । नेपाली भाषीको बाक्लो उपस्थिति रहेको भारतको आसममा उनले भव्य कार्यक्रम गरेका थिए।जसमा बाक्लो दर्शकको उपस्थितिको बिचमा उनले लिपुलेक र...
पुर्वपत्निले ‘बेस्ट ड्याड इन द वर्ल्ड ’भन्दै ऋतिकलाई दिइन् जन्मदिनको शुभकामना
भारत । आइतबारदेखि ४७ वर्ष लागेका बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनलाई जन्मदिन अवसरमा उनकी पूर्व श्रीमती सुजेन खान पनि शुभकामना दिएकी छिन् । जसको चर्चा भारतिय संचारमाध्यमहरूमा खुवै चलेको छ।सुजेनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा ऋतिक र उनीहरूको दुई छोरा, रिहान र रिधनको भिडिओ पोष्ट गर्दै ऋतिकलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएकी हुन्। सुजेनलले पोष्ट गरेको भिडिओमा...
बोल्ड अभिनेत्री माल्भिकाको हट अवतार ( तस्विरहरु हेर्नुस्)
काठमाडौँ । बलिउडमा दर्शकले सर्वाधिक रुचाउने नाम मध्ये एक हो, माल्भिका शर्मा । अभिनेत्री शर्मा आफ्नो बोल्ड शरीरका कारण खुबै चर्चामा आउछिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको फ्यान फ्लोइङ लोभलाग्दो छ ।इन्स्टाग्रममा त उनका झन्डै ८ लाख फलोअर छन् । दक्षिण भारतीय चलचित्रमा जमेकी माल्भिका &lsquo;नेला टिकट&rsquo; चलचित्रबाट चर्चामा आएकी हुन् ।...
ज्योतिको परिश्रमले बनेको उनको सपनाको घर(भिडियो सहित)
काठमाडौँ ।कलाकारिताको क्षेत्रमा बेलाबेला चर्चाको शिखरमा आइरहने गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले&nbsp; काठमाडौँमा घर बनाएकी छिन् । सन् २००६ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेकी उनी आफ्नै परिश्रमले घर बनाएको बताउछिन् । स्टेस प्रस्तुति, पहिरन, बोल्ड अभिव्यक्तिका कारण उनी बेलाबेला चर्चामा आइरहनछिन् । छोटो तथा खुलेको पहिरन र उनको बोलीको 'बोल्डनेस' त उनका...
बेलायत सरकारले जारी गरेको लकडाउनको नियम तोड्दै सैलुङ पुगिन् प्रियंका
काठमाडौँ । नयाँ कोरोनाको प्रकोपसँगै बेलायत सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । जसमा बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा&nbsp; उतै फसेकी छिन् ।यसैविच उन सरकारद्वारा निर्देशित नियम तोड्दै जोश वुडको स्टाइलिस सैलुनमा आफ्नी आमा मधु चोपडासँग पुगेकी थिइन् । हेयर ड्रेसरले लकडाउनको नियम उल्लंघन गरेको बताइएपछि प्रहरी सैलुनमा पुगेको र सैलुनका मालिकलाई...
डिशहोममा शनिबार अपरान्ह २ बजे नियमित रुपमा हलिउड चलचित्र प्रसारण हुने
काठमाडौँ&nbsp; ।&nbsp; डिशहोममा रियालिटी टीभीमा हलिउड चलचित्र प्रशारण हुने भएको छ । अबदेखि हरेक शनिबार अपरान्ह २ बजे नियमित रुपमा हलिउड चलचित्र प्रसारण हुन लागेको हो । जस अन्तर्गत पुस २५ गते अर्थात भोली चलचित्र फ्लाइट १९२ प्रसारण हुने छ । डिशहोमको च्यानल नम्बर&ndash;१०२ रियालिटी टीभीमा उक्त चलचित्र प्रदर्शन हुन लागेको...
६ बर्षे बैबाहिक जीवनलाई पूर्णविराम लगाउँने तयारीमा किम र कान्ये
काठमाडौं &ndash; टीभी स्टार किम कार्दशियन र उनका पति कान्ये वेष्ट आफूहरुको ६ बर्ष लामो बैबाहिक जीवनलाई अलग बाटोमा लैजाने तयारीमा लागेका छन् । ई न्यूजका अनुसार, उनीहरुले वैवाहिक जीवनलाई पूर्णविराम लगाउने तयारी थालेका हुन् । तर, अहिलेसम्म किमले डिभोर्सको फाइल भने दर्ता गरिसकेकी छैनन् । तर, केही समयदेखि उनीहरु अलग&ndash;अलग...
फिल्मी क्षेत्रमा कविताको पहिलो कदम, मथिङ्गलमा चिन्ताको बादल मढारिदै
काठमाडौँ ।&nbsp; आफ्नो अभिभावकको पथलाई निरन्तरता दिदै धेरै जना कलाकारिताको क्षेत्रमा उदायका छन् । कति सफल भएका छन् भने कति समय अगावै अस्ताएका पनि छन् । यस्तैमा सदावहार अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरकी छोरी कविता मानन्धरे पनि फिल्म &lsquo;एउटा यस्तो प्रेम कहानी&rsquo; मार्फत् फिल्मी क्षेत्रमा पहिलो पाहिला राख्ने जमर्कोेमा छिन् । जुन माघ...
सचिन परियारको पहिलो गीत ‘ओठ खोलेर’ युटुबको ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं &ndash;पछिल्लो समय सामाजिक सन्जालमा भाइरल बाल गायक सचिन परियारको पहिलो गीत युटुबको ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा पुग्न सफल भएको छ। केही दिन अघि लेकसाइड टिभीको युटुब च्यानलबाट रिलिज &lsquo;ओठ खोलेर&rsquo; बोलको गीतलाई छोटो समयमा अत्याधिक भ्युज मिलेको छ। सचिन परियार, रविना बसेल, अर्जुन कुँवर र अस्मिता बुढाथोकीको सुमधुर आवाज रहेको...
आमा बनिन् अभिनेत्री गौरी मल्ल
काठमाडौँ । &lsquo;एक्लै हुँदा प​र​देश​मा&rsquo; बोलको गितको म्युजिक भिडियोमा अभिनेत्री गौरी मल्ल र अभिनेता पल शाह आमाछोराको भूमिकामा देखिएका छन्। साहिल खानको निर्देशनमा निर्माण भएको यस भिडियोले गरिबका कारण मातृभूमि तथा परिवारसँग टाढा रहेर बस्नुपर्दाको दर्दनाक र पिडादायी जीबनलाई मार्मिक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । गीतमा तारा प्रकाश लिम्बूको संगतिमा कमल...
‘तोरी पेली तेल’ मा उत्कृष्ट कभर भिडियो बनाउनेलाई डेढ लाख नगद पुरस्कार
काठमाडौँ । आँचल शर्मा र नाजिर हुसेन अभिनित &lsquo;तोरी पेली तेल&rsquo; बोलको गीतमा कभर भिडियो बनाउने प्रतिस्पर्धा राखिएको छ । जसमा उत्कृष्ट भिडियोलाई डेढ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ । साथै बिजेतालाई एउटा भिडियोमा काम गर्ने अवसर समेत दिइनेछ । दीपक शर्माको शब्द तथा संगीत रहेको डान्सिङ शैलीमा तयार भएको...
नयाँ बर्षको अवसर पारेर ऋचाले घोषणा गरिन् ‘कौसीद’
काठमाडौं &ndash; नायिका ऋचा शर्माले अंग्रेजी नयाँ बर्षको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र निर्माणको घोषणा गरेकी छिन् । उनले, चलचित्र &lsquo;कौसीद&rsquo; निर्माण गर्न लागेको बताएकी छिन् । केदार भुषाल निर्माता रहने चलचित्रलाई कुमार भाष्करले निर्देशन गर्दैछन् । यो चलचित्रमा भोलाराज सापकोटा र ऋचा शर्माको मुख्य भूमिका रहनेछ । चलचित्रमा लक्ष्मण बाँनिया सह&ndash;निर्माताको...
नवलपुरका युवाको प्रेममा बागलुङकी युवती परेपछि(भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं &ndash; बागलुङमा मेरी मायालु गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नवलपुरका स्थानीय युवाहरुको सहकार्य र अभिनय रहेको बाग्लुङमा मेरी मायालु, पाल्पामा घर&rsquo; बोलको गीतमा ओएसआर डिजिटल युट्यूब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो । उक्त गीतमा राजेशकुमारको स्वर रहेको छ । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा नयाँ गीतकारको रुपमा पहिचान बनाएका राजेश...
नायिका वर्षा सिवाकोटी स्किन हस्पिटलको सिइओमा नियुक्त
काठमाडौं &ndash; अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी &lsquo;नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल&rsquo; अन्तर्गतको स्किन सिटीको सिइओ बनेकी छिन् । उनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू स्किन हस्पिटलको सिइओमा नियुक्त भएको बताएकी हुन् । &lsquo;अभिनयसँगै आफ्नो पाइला व्यवसायिकतामा पनि अगाडि बढाएको जानकारी गराउँन चाहन्छु । स्किन हस्पिटलमा मेरो पनि केहि शेयर रहेको बताउन चाहान्छु ।...
पलको साथमा टिकटक स्टार स्मारिका र सामारिका
काठमाडौँ । गायक विशाल निरौलाको &lsquo;माया लाउन मसँग&rsquo; बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । जसमा रचना रिमालले विशाललाई साथ दिएकी छन् । उक्त गितको म्युजिक भिडियोमा अभिनेता पल शाहका साथमा प्रसिद्ध टिकटक स्टार स्मारिका र सामारिका ढकालको अभिनय देख्न सकिन्छ । केशव बैरागी माइलाको शब्द, ज्ञानेन्द्र गिरी रहेको गीतको भिडियो...
‘हलाल’मा सुष्माको आइटम डान्स(भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं &ndash; चलचित्र &lsquo;एउटा यस्तो प्रेम कहानी&rsquo;मा समावेश &lsquo;हलाल&rsquo; बोलको आइटम गीत सार्वजनिक गरिएको छ । यो चलचित्र निर्माण भएको केही समय भएपनि चलचित्र रिलिज हुने या नहुने अन्यौल थियो । तर, अब भने यो चलचित्रलाई रिलिज गर्ने तयारीमा यसको निर्माणपक्ष लागेको छ । यही बर्ष नै चलचित्र रिलिज गर्ने...
स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै खुले फिल्म हल
काठमाडौँ । करिव ९ महिनादेखि बन्द रहेको फिल्म हलहरु शुक्रबारबाट सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले अनुमति नदिए पनि हल व्यवसायीहरु आफैंले एकतर्फी निर्णय गर्दै हल खोलेका हुन् । सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै तत्काललाई ५० प्रतिशत मात्र दर्शक राख्ने गरेर हल खोलिएको नेपाल चलचित्र संघले जनाएको छ...
कसैको झोले नबन्ने गायक पशुपति शर्माको आशय,ल्याए ‘कठै मेरो देश’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं &ndash; लोक तथा दोहोरी गायक पशुपति शर्माको कठै मेरो देश सार्वजनिक भएको छ। देशको समसामयीक राजनीतिमा आधारित गित कठै मेरो देश उनले आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरेका हुन्। देशमा नेताहरुको कार्यशैलीले जनता बौलाएको र कतिबेला हास्ने त कतिबेला रुने गरेको गितमा देखाइएको छ। उनले विदेशी शक्तिको इसारामा नेपालका नेताहरु...
नीना कान्त सोसल एड्भोकेसी विजेता बनेर मिस युनिभर्स नेपालको उत्कृष्ट १० मा
काठमाडौँ । मिस युनिभर्स नेपालले यस वर्षको उत्कृष्ट १८ प्रतियोगी घोषणा गरेको छ।एमयुएनले मंगलबार मेरिएट होटेलमा समारोह आयोजना गर्दै उत्कृष्ट १८ छनौट गरेको हो। सो समारोहमा उत्कृष्ट १८ ले समाजमा आफ्नो उद्देश्यबारे बताएका थिए। त्यसैको आधारमा उपस्थित मिडियाका प्रतिनिधिले सोसल एड्भोकेसी विजेताका लागि भोटिङ गरेका थिए। उक्त भोटिङको परिणामको आधारमा नीना कान्त...
हाल खुलेको पहिलो दिन ‘आमा र सेन्टी भाइरस’
काठमाण्डौँ ।नेपाल सरकारले हल संचालनका लागि अनुमती नदिएपछि शुक्रबारबाट हल चलाउने घोषणा हल व्यवसायीहरुको छाता संगठन चलचित्र संघले गरिसकेको छ ।योसँगै पौष १० गते हलमा &lsquo;आमा र सेन्टी भाइरस&rsquo; चलाउने तयारी गरिएको छ । यी दुबै चलचित्र हलमा रिलिज भैरहेको समयमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएको थियो । जसलेगर्दा, यी...
भुवन केशीको फिल्ममा बुद्ध र केविकालाई अवसर
काठमाण्डौँ ।डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल&rsquo;मा फस्ट रनरअपको रुपमा उभिन सफल वुद्ध लामा र उनको कोरियोग्राफर पार्टनर केविका खत्रीले नयाँ चलचित्रमा अवसर पाउने भएका छन् ।सो चलचित्र भुवन केशीले निमार्ण गर्न लागेका हुन् । उक्त चलचित्रमा बुद्धले एउटा गीतमा आफ्नो स्वर भर्नेछन् भने केविका खत्रीले एउटा गीतको भिडियोलाई कोरियोग्राफी गर्नेछन् ।शनिबार...
डान्सिङ्ग विथ द स्टार्सको उपाधि सुबिजु जोडीलाई,बिजेताले पाए २० लाख नगद
काठमाडौं &ndash; सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीको (सुविजु) जोडीले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको रियालिटी शो डान्सिङ्ग विथ द स्टार्सको उपाधि जितेको छ। शनिबार राति भएको फाइनलनमा वुद्ध लामा र केबिका खत्री तथा प्रियना आचार्य र सुभम् भुजेलको जोडीलाई पछि पार्दै सुमी मोक्तान र बिजु पार्कीको जोडी विजेता बनेको हो। बिजेताले २०...
सिङ्गिङ स्टारको टप टेनमा पुगे सुमन,अत्याधिक भोट मार्फत विजयी गराउन आग्रह
धरान &ndash; गायक सुमन राई रियालिटी शो सिङ्गिङ स्टारको टप टेनमा पुगेका छन् । लाइफ अफ ओके टेलिभिजनबाट प्रशारित रियालिटी शो सिङ्गिङ स्टारमा आफ्नो माधुर्य स्वरबाट निर्णायकको मन जित्न सफल गायक राई धरानका हुन् । हरेक शुक्रबार तथा शनिबार लाइफ अफ ओकेको उत्कृष्ट १० पछिको यात्रा भोटिङबाट हुने भएकोले दर्शकको मतका आधारमा...
युटुबको ट्रेन्डिङमा नम्बर १ मा आएको ‘दाल भात तरकारी'को कमेन्ट सेक्सन किन गरियो बन्द ?
काठमाडौं &ndash; गतबर्षको बैशाखमा रिलिज भएको चलचित्र &lsquo;दाल भात तरकारी&rsquo; युटुबमा सार्वजनिक भएको एक साता भयो । युटुबमा सार्वजनिक भएको एक सातामा नेपालमा नम्बर १ ट्रेन्डिङमा रहेको चलचित्रलाई २५ लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो चलचित्रले हलमा औषत व्यापार गरेको थियो । निर्माताले लगानी सुरक्षित गरेपनि चलचित्रले समिक्षागत रुपमा...
पूर्वपत्नीविरुद्ध अदालत जाने मनोज गजुरेलको चेतावनीमा मिनाको जवाफ- 'म मेडिकल काउन्सिल जान्छु'
काठमाडौ - हास्य कलाकार मनोज गजुरेलर उनकी पूर्व पत्नि मिना ढकालको विवाद फेरि छचल्किएको छ । मनोजले मिनाको नाम नलिइकनै शालिन ढंगले मिनाका केही टिप्पणीहरुको बिरोध गरेका थिए । उनले यस्तै आरोप लागिरहने हो भने अदालत जानुको बिकल्प नरहेको बताएका थिए । मनोजले बारम्बार आफ्ना बारेमा पूर्वपत्नी मिना ढकालले लगाइरहेको आरोपको...
भुवन केसीलाई रोमान्स किङको संज्ञा दिदा गौरी मल्लको प्रश्न-‘तँ रोमान्स किङ रे ?
काठमाडौं - भुवन केसी र गौरी मल्ल नेपाली चलचित्रका समकालिन कलाकार हुन् । उनीहरुले थुप्रै चलचित्रमा सँगै काम गरेका छन् । यो जोडीको मित्रता खुलेर प्रकट भयो हालै एक टिभी रियालिटी शोमा । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने डान्सिङ विथ स्टार्सको २३ औं एपिसोड (सेमिफाइनल) मा अतिथिको रुपमा उपस्थित भएका थिए भुवन...
काठमाडौं &ndash; निर्देशक विक्रम भट्टको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र &lsquo;१९२०&rsquo;बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी नायिका अदा शर्माले टपलेस फोटोसुट गरेकी छिन् । एक म्यागेजिनका लागि उनले गरेको टपलेस फोटोसुटले सामाजिक संजालमा चर्चा पाइरहेको छ । अदाले गरेको फोटोसुट भिन्न खालको छ । उनले, फोटोसुटका क्रममा जुँगा राखेकी छिन् । बलिउडमा नायिकाहरु भिन्न...
पूर्वपत्नीविरुद्ध कानुनी लडाईंमा जाने मनोज गजुरेलको चेतावनी, भन्छन् -'सहनुको पनि सीमा कट्यो'
काठमाडौं - चर्चित हाँस्य व्यंग्य कलाकार मनोज गजुरेलले पूर्वपत्नी मिना ढकालविरुद्ध कानुनी लडाईंमा जाने चेतावनी दिएका छन्। झण्डै तीन वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेद गरेका गजुरेलविरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट अर्को पक्ष (मिना ढकाल) बाट गाली बेइज्जती भइरहेको र त्यसको असर आफ्नो परिवारसम्म परेको भन्दै गजुरेलले अब सहन नसक्ने बताएका हुन्। सोमबार साँझ फेसबुकमा स्ट्याटस...
''वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको विवाह हुँदै भनेर आएको समाचार देख्दा दया लाग्यो"
काठमाडौँ &ndash; नायिका वर्षा सिवाकोटीले अनलाइन मिडियामा आएका भ्रामक समाचार देखेर दया लागेको बताएकी छन्। फेसबुकमा लामो स्टाटस राख्दै उनले भिजिटर बढाउने नाममा याथार्थ भन्दा निकै बाहिर पुगेर गरिएको प्रचारले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम बनाएको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, &lsquo;वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको विवाह हुँदै , भनेर आएको समाचार...
धनगढी &ndash; &lsquo;पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु। अचार पनि, धेरै खान्या हुँ। हिजो कम खाँ हुँ नि मैले , धेरै खान्या हुँ। नरुनु।&rsquo; दुलहीले कारबाट आमालाई सम्झाउँदै भनेको यो भिडियो अहिले निकै चर्चामा आएको छ।&lsquo;विचार गरेस् है आफ्नो। आफ्नो शरीर स्वस्थ एपछि मात्र सबै चिज हुन्छ है। ख्याल राख्नु।&rsquo;...
गायिका टिका सानु र कृष्ण कँडेलको सम्बन्ध विग्रिएकै हो त ? के भन्छिन त टिका ?
काठमाडौं &ndash; गायीका टिका सानुले बोलेको एउटा पुरानो भिडियोको अंश भाइरल बनाउँदै इन्द्रेणी कार्यक्रम र त्यसका संचालकसंगको सम्बन्धलाई लिएर भएको टिप्पणी प्रति गायीका टिकाले स्पष्टिकरण दिएकी छन् । उनले कार्यक्रमका बारेमा बोलेका केही भिडियोको सानो अंश भाइरल बनाएर संचालक कृष्ण कँडेलसंग सम्बन्ध विग्रिएको टिप्पणी गरिएको छ । इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी...
चलचित्र ‘प्रकाश’का लागि कलाकारको खोजी गरिदै
काठमाडौँ ।नायक प्रदिप खड्काको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र &lsquo;प्रकाश&rsquo;का लागि अन्य कलाकारको खोजी गरिदै छ । चलचित्र निमार्णकर्ताले कलाकार खोज्नका लागि अडिसन लिने भएका छन् । उक्त चलचित्रका लागि १६ &ndash; १८ बर्ष उमेरकी नायिकाको खोजी गरिएको छ । यस्तै २० देखि २२ बर्ष भित्रका अर्का नायकको पनि खोजी गरिएको छ...
फेस अफ एशिया २०२०’मा नेपाली विवेक उत्कृष्ट १३ मा
काठमाडौं &ndash; एशिया मोडल फेष्टिभल अन्तर्गत रहेको &lsquo;फेस अफ एशिया २०२०&rsquo;मा नेपाली विवेक खड्का उत्कृष्ट १३ मा पर्न सफल भएका छन् । साउथ कोरियाबाट विगत १५ वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगीतामा उनी उत्कृष्ट १३ भित्र पर्न सफल भएका हुन् । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट १३ भित्र नेपाल पहिलो पटक पर्न सफल भएको हो...
तस्बिरमा हेर्नुहोस् अभिनेत्री श्वेता र विजयेन्द्रसिंहको बिवाह
काठमाडौं &ndash; अभिनेत्री श्वेता खड्काले विजयेन्द्रसिंह रावतसँग बिहे गरेकी छिन् । परिवार र नजिकका आफन्तबीच उनले सोमबार काठमाडौंमा बिहे गरेकी हुन् । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएको ६ वर्षपछि उनी बिहे गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन् । श्वेतासँग बिहे भएको २ दिनमै श्रीकृष्ण बिरामी भए । उपचारकै क्रममा २०७१ साउन २५ गते...
काठमाडौं &ndash;वरिष्ठ गायक जगतमर्दन थापाको ८५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार बिहान १० बजे उनको निधन भएको छोरा मोहितमर्दन थापाले बताए । कोरोना संक्रमणपश्चात् लगभग एक महिनादेखि थापा अस्पतालमा उपचाररत थिए । झन्डै डेढ हप्ताअघि कोरोनामुक्त भए पनि छातीमा समस्या देखिएपछि थापालाई भेन्टिलेटरमा...
विवाह बन्धनमा बाँधिदैं मनोज गजुरेल
काठमाडौं &ndash; कलाकार मनोज गजुरेलले दोश्रो विवाह गर्ने भएका छन्। एक संचार माध्यमसँग कुरा गर्दै उनले आफू छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको स्वीकार गरे। तपाईंहरूले जे सुन्नुभयो त्यो सत्य हो, बाँकी कुरा समय आएपछि सार्वजनिक गर्नेछु, उनले भने। कोसँग विवाह गर्दैछन् भन्ने कुरा अहिले नै सार्वजनिक नगर्ने उनको भनाइ छ। केही व्यवहारिक...
लगनगाँठो कस्दै नायिका श्वेता खड्का,भन्छिन्–मेरो आँशु मात्र हेर्न चाहनेलाई मेरो बिहेको निर्णयले पोल्नेछ’
काठमाडौं &ndash;अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफ्नो जीवनको दुःखद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको बताएकी छन्। उनीआज मंसिर २२, सोमबारमा बिहे गर्दैछिन्। &lsquo;म जीवनको दुःखद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु,&rsquo; उनले बिहेको पूर्वसन्ध्यामा, आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्, &lsquo;त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै...
‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपालबाट बाहिरिइन् ज्योती मगर
काठमाडौं &ndash; गायिका ज्योती मगर हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण भैरहेको लोकप्रिय रियालिटी शो &lsquo;डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल&rsquo;बाट बाहिरिएकी छिन् । उनी, शोको सेमिफाइनलको नजिक पुगेर बाहिरिएकी हुन् । ज्योतीले यो शोमा विभिन्न शैलकिा नृत्य प्रस्तुत गरिन् । दर्शकमाझ हट गायिकाको रुपमा चिनिएकी ज्योतीले आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गर्ने कोशिश यो शोमा गरेकी...
काठमाडौं &ndash; कोरोना महामारीका वावजुत पनि सिमित मानिसहरुको उपस्थितीमा आयोजित &lsquo;मिस नेपाल वर्ल्ड २०२०&rsquo;को उपाधी नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छिन् । यो बर्षको &lsquo;मिस नेपाल वर्ल्ड&rsquo;मा २० जना प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए । देशभरबाट आएका २ सय भन्दा बढी आवेदनबाट छानिएका २० जना प्रतिस्पर्धीहरुविचको कडा प्रतिस्पर्धा काठमाण्डौको बूढानीलकण्ठमा रहेको पार्क भिलेज रिसोर्टमा...
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेत्री उर्मिला मातोडकर शिवसेना प्रवेश गरेकी छन्। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा उनी कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचन लडेकी थिइन्। सो निर्वाचनमा उनलाई भारतीय जनता पार्टीका गोपाल शेट्टीले पराजित गरेका थिए। निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि उनले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा कांग्रेस छाडेकी थिइन्। उनले पार्टी प्रवेश गरेको पाँच महिनामा सो पार्टी छाडेकी हुन्। मंगलबार...
काठमाडौं &ndash; नायिका केकी अधिकारी अहिले पाल्पामा चलचित्र &lsquo;परदेशी २&rsquo;को छायांकन गरिरहेकी छिन् । चलचित्रमा उनको जोडीको रुपमा प्रकाश सपुतले काम गरिरहेका छन् । साथमा, चलचित्रमा दिलिप रायमाझी, वर्षा सिवाकोटी, प्रशान्त तामाङ लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रको छायांकन लकडाउनका कारण रोकिएको थियो । निर्माणपक्षले लकडाउन अगाडि ७० प्रतिशत छायांकन...
अब प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा
काठमाडौं &ndash;प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार @kpsharmaoli_official ह्याण्डल सञ्चालनमा आएको हो। प्रधानमन्त्री पहिलादेखि नै फेसबुक र ट्विटरमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, उहाँका धारणाहरू लोकप्रिय बनेको टिकटकबाट पनि जनतामा पुर्&zwj;याउन खोजेका हौं। टिकटकले प्रधानमन्त्रीको अकाउन्ट भेरिफाइ गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो भिडिओमा एक लाख भ्युज...
‘हेरिटेज अफ फेसन नेपाल–२' नेपाल र अष्ट्रेलियामा आयोजना हूँदै
काठमाडौ &ndash; असाप इन्टरटेन्मेन्टले हेरिटेज अफ फेसन नेपाल सिजन २ को आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । आउँदो बर्षको मार्च १५ मा नेपाल र अष्ट्रेलियामा यो कार्यक्रमको आयोजना हुनेछ । यो कार्यक्रमको आयोजक निर्माता सन्तोष अधिकारी हुन् । उक्त फेसन शोमा नेपाली तथा विदेशी मोडलहरुको सहभागीता रहने बताइएको छ । कोरोनाले...
जब कोरोनाले गलाएर हास्य कलाकार मनोज गजुरेल अस्पतालको आइसियूमा पुगे..
काठमाडौं &ndash; चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल ११ दिनको आइसियू उपचारपछि कोरोनामुक्त भएर अहिले घरमा आराम गरिरहेका छन्।संक्रमणमुक्त भए पनि तन्दुरूस्त नभएकाले उनी अहिले पनि चिकित्सकको नियमित परामर्शमा छन्। फोक्सो र छालाको बीचमा भरिएको हावालाई पाइपबाट निकाल्नु परेकाले त्यसको दुखाइ अझैं उनले खेपिरहेका छन्। जसले गर्दा अरूबेला जस्तो उनी छरितो...
सैँ पनि एमाले,मैं पनि एमालेबाट पछि हटे बद्री लेखे-‘सैँ पनि नेपाली,मैं पनि नेपाली’
काठमाडौं &ndash; आइतबार बिहान कलाकार बद्री पंगेनीले ट्वीटरमा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई व्याख्या गरे। यसले दुई तिहाई सरकार भित्रको आन्तरिक कलह र त्यसले बाहिर निकालेको असन्तुष्टि अर्थ्याएको छ। यी त्यही गायक हुन् जसले दुई तिहाईको नेकपा सरकार बन्नु अगाडि चुनावी अभियानमा पार्टी समर्थनको गीत गाएका थिए, &lsquo;सै पनि एमाले, मै पनि एमाले।&rsquo;...
काठमाडौँ । अभिनेता आशिरमान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्के अभिनीत &lsquo;भूल&rsquo; बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक प्रविन दियालीको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीतको भिडियोलाई उज्वल जोशीले छायांकन, सम्पादन र रंगरोगन गरेका हुन् । विवेक रसाइलीले निर्देशन गरेका हुन् । गीतको भिडियोमा अजय गुरुङको पनि अभिनय रहेको...
काठमाडौं &ndash; आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न लागेकोले त्यसलाई रोकी पाऊँ भन्दै र्&zwj;यापर गायक भिटेन भनेर समिर घिसिङ उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार आफूलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिन भिटेनले माग गरेका छन्। उहाँ पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु भन्ने माग गर्दै निवेदन लिएर यहाँ आउनु...
काठमाडौं &ndash;चर्चित हाँस्य सिरियल &lsquo;सक्किगोनी&rsquo; अब हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने भएको छ । लामो समयदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको यो सिरियल मंसिर २० गतेबाट भने हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्जुन घिमिरे र कुमार कट्टेलको कथा, पटकथा, संवाद र निर्देशनमा प्रशारण हुँदै आएको यो सिरियल लकडाउनका कारण...
निराजन र प्रविशाको ‘उड्यो रे मेरो मन’ (भिडियो)
गायक निराजन कँडेल र गायिका प्रविशा अधिकारीको स्वरमा समावेश &lsquo;उड्यो रे मेरो मन&rsquo; बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । यो गीतमा शब्द तथा संगीत प्रमोद कोइरालाको छ । भिडियोमा सागर थापा र रोशनी कार्कीलाई फिचरिङ गरिएको छ । दिन्सन शाहले सम्पादन गरेको भिडियोमा अनिल के मानन्धरको छायांकन तथा निर्देशन छ ।...
चर्चित हाँस्य सिरियल &lsquo;सक्किगोनी&rsquo; अब हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने भएको छ । लामो समयदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको यो सिरियल मंसिर २० गतेबाट भने हिमालय टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्जुन घिमिरे र कुमार कट्टेलको कथा, पटकथा, संवाद र निर्देशनमा प्रशारण हुँदै आएको यो सिरियल लकडाउनका कारण केही...
जितु नेपालले छक्का पन्जा टिम छाडेकै हुन त ?
काठमाडौं - छक्का पन्जा फिल्मले आफ्नो नयाँ टोली विस्तार गर्ने भएको छ। हाँस्य विधाका फिल्महरू निर्माण गर्दै आएको यो टोलीमा अहिले दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल (मुन्द्रे), केदार घिमिरे (माग्ने बुढा), शिवहरि पौडेल लगायत कलाकार छन्। तर अब यो टोलीबाट निर्माण हुने केही फिल्ममा जितु नेपाल नदेखिने भएका छन्। फिल्ममा उनी...
काठमाडौं - कलाकार मनोज गजुरेलमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको गजुरेल आफैंले जानकारी दिएका छन् ।यसअघि गजुरेलका दाजुलाई पनि संक्रमण देखिएको थियो । उनले दाजुलाई अस्पताल लैजाने&ndash;ल्याउने गरेका थिए । गत विहीबारदेखि सामान्य टाउको देख्ने र ज्वरो आउने...
काठमाडौँ : जनम थुलुङको स्वर तथा सङ्गीत रहेको "तिमीलाई हेरी" गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।&nbsp; जनम थुलुङ अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको सो गीतमा जनम थुलुङ्सँगै अहिलेकी लोकप्रिय गायिका मेलिना राईको समेत स्वर रहेएको छ । तिमीलाई हेरी नाम रहेको गीत जेन्नी राईले लेखेकी हुन् भने एरेन्ज राजु कार्कीको रहेको...
पूजा, पल र आकाश एकसाथ भिडियोमा
नायिका पूजा शर्माले नायकद्धय पल शाह र आकाश श्रेष्ठसँग चलचित्र र म्यूजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन् । तर, पूजा, पल र आकाशले एकसाथ काम भने गरेका थिएनन् । उनै, पूजाले शनिबार फरक अनुभुती गरिन् । म्यूजिक भिडियोमा जमिरहेका दुई नायक पल शाह र पूजा आकाश श्रेष्ठसँग पूजाले एकसाथ काम गरेकी छिन्...
गायक एंव संगीतकार रमित लामाको &lsquo;शेर्पिनी आजि&rsquo; बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । डम्फु मिडियाको अफिसियल युटुब च्यानलबाट उक्त गीत सार्वाजानिक गरिएको हो । &lsquo;डाँडा है पारी&rsquo; बोलको गीतबाट चर्चा बटुलेका गायक एंव संगीतकार रमित लामाको हालसालै बजारमा आएको उक्त सेलो गीतमा शेर्पिनी आजीले च्याङ्बालाई मोहनि लगाएको बर्णन गरिएको छ ।...
मोटी वर्षा अहिले कसरी स्लिम ?
काठमाडौं &ndash; नेपाली चलचित्रमा नायिका वर्षा राउतको करिअर सुखद तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ । चलचित्र होस् या म्यूजिक भिडियोमा नै किन नहोस्, वर्षाको व्यस्तता कम भएको छैन । लकडाउन अगाडि वर्षाले चलचित्र &lsquo;२ नम्बरी&rsquo;मा काम गरिरहेकी थिइन् भने &lsquo;के घर के डेरा&rsquo; साइन गरेकी थिइन् । उनलाई निर्देशक विकासराज आचार्यले चलचित्र...
दुर्गेशको ‘तिमी यति राम्री किन’(भिडियो)
काठमाडौं &ndash; गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त गीत आइतवार युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा रोशन सिंहले शब्द तथा संगीत सिर्जना गरेका छन् । यस्तै गीतको संयोजन साहस शाक्यले गरेका छन् । त्यस्तै गीतमा मोडल दुर्गेश र गायिका अञ्जु पन्तको स्वर सुन्न सकिन्छ । आधुनिक...
अभिनेता अर्जुन र उनकी प्रेमिका मलाइकामा पनि कोरोना संक्रमण
मुम्बई &ndash; भारतीय कलाकार अर्जुन कपूरले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत आइतवार जानकारी दिए । कोरोना संक्रमण भएपछि उनी आइसोलेसनमा छन् । अर्जुनपछि उनकी प्रेमिका मलाइका अरोरामा पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । मलाइकाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफू कोरोना संक्रमित भएको बताएकी छिन् । &lsquo;मलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ, सेल्फ...
८४ वर्षे ‘हट’ हजुरबा : अझै युवतीसँगै र्‍याम्पमा हिँड्छन्(तस्बिरमा हेर्नुस्)
बेइजिङ-&nbsp; ८४ वर्षीय वृद्धको दैनिकी कस्तो हुनसक्छ ? बिहान ढिला उठ्नु, बगैँचामा डुल्नु, छतमा टहल्नु, दिउसो सुत्नु आदि ।तर वाङ डेसुन नामका चिनियाँ कलाकारको तन्दुरुस्ती लोभलाग्दो छ । उनी एक आम कलाकार थिए, तर कठिन मेहनत गरेर उनले ८० वर्षको उमेरमा आफूलाई एक चर्चित फेशन मोडेलको रुपमा स्थापित गरे...
काठमाडौं - नेपाल आइडल सिजन&ndash;३ को उपाधि सज्जा चौलागाईंले उचालेकी छन् । शुक्रबार नेपाल आइडलको स्टुडियोमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा सज्जाले उपाधि उचाल्दा फस्ट रनरअप प्रवीण बेडुवाल बने भने सेकेन्ड रनरअपको उपाधि किरणकुमार भुजेलले उचाले । देर्शकले विश्वभरबाट दिएको भोट र निर्णायकको मूल्यांकनका आधारमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपाल...
जन्मदिनमा दीपाश्रीले भनिन्,-‘अब गल्ती गर्दिनँ,आफ्नै दिदीबहिनी सम्झेर माफ गरिदिनु होला'
काठमाडौँ &ndash; कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला आजबाट ४६ वर्ष लागिन्। विराटनगरमा जन्मिएकी निरौलाले जन्मदिनको अवसरमा फेसबुकमा दर्शकको लागि भिडियो सन्देश पोस्ट गरिन्। दर्शकसँग ७ मिनेट माग्दै निरौलाले लेखेकी छन्, &lsquo;धेरै दिन देखि म तपाईँहरुसँग टाढा थिएँ, त्यसैले केही मनका कुरा गर्न मन लाग्यो र एउटा भिडियो बनाएकी छु, आज गते...
काठमाडौं &ndash; &lsquo;देशद्रोही&rsquo; शीर्षकमा सार्वजनिक एक गीतमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्ने व्यक्तिको नाम खुलाइएको छैन । उनलाई महानगरिय अपराध महाशाखा, काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । अपराध महाशाखाका एसएसपी दिपक थापाले भने घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । मुलुकी अपराध संहिताले राष्ट्रिय गान...
नेपालको झण्डा जलाइएको आपत्तिजनक भिडियो युट्युबमा,कारबाहीको माग
काठमाडौं &ndash; घृणा र आपसी विभाजनलाई प्रशय दिने खालका शब्दसहितको र्&zwj;याप गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मंगोल ग्याल्ज ली नाम गरेका र्&zwj;यापरले आफै रचना गरी तयार पारेको गीतको म्यूजिक भिडियोमा नेपालको झण्डा जलाएको दृष्य देखाइएको छ। बाहुन&ndash;क्षेत्रीलाई आदिबासीको &lsquo;दुश्मन&rsquo; का रुपमा प्रस्तुत गरिएको गीतको नाम &lsquo;देशद्रोही&rsquo; रहेको...
गायिका आस्था राउतको 'फाटेउनी माइतीको चिनो' (भिडियो )
गायिका आस्था राउतको नयाँ गित फाटेउनी माइतीको चिनो गित सार्वजनिक भएको छ । संगितकार सुरेश अधिकारीको शब्द संगित रहेको उक्त गितमा गायिका आस्था राउतको स्वर रहेको छ । माइतीको सम्बन्ध लाई उजागर गर्दै ल्याएको उक्त गितको म्युजिक भिडियोमा दिया मास्के र मनोज जोशीको अभियान रहेको छ । भिडियो :&ndash; ...
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’की होस्ट ओसिनकको बोल्ड पोज(तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
काठमाडौं &ndash;भिजे तथा मोडल ओसिन सिटौलाका हजारौं फ्यान छन् । उनको बोल्ने कलाले फ्यानको ध्यान तान्ने गर्छ । पछिल्लो समय भने ओसिन मिडियामा खासै देखिएकी छैनिन् । द भ्वाइस अफ नेपालमा सुसिल नेपालसँग कार्यक्रमको होस्ट गरेकी ओसिनलाई त्यही शोबाट धेरैले नोटिस गरे । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने ओसिनलाई इन्स्टाग्राममा १ लाख ७४...
लिगेश र ऋचाको माया पिरती!( भिडियो सहित)
काठमाडौं &ndash; फिल्म निर्देशक एव्म मोडल लिगेश भट्टराईको निर्देशन तथा अभिनयमा &lsquo;लाऊ माया पिरती&rsquo;बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । गीतमा गायक आनन्द कार्की र गायिका शान्ता खत्रीको स्वर रहेको छ । गायिका खत्रीकै शब्द रहेको उक्त गितमा रिमेश कुमारले संगीत भरेका छन् । विभिन्न ठुला पर्दाहरुमा समेत काम गरिसकेका निर्देशक एव्म मोडल...
विनयले ल्याए ‘लकडाउनको तिज' ( भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं &ndash;नारीहरुको विशेष पर्व तिज आउँन अझैपनि केहि दिन बाँकी छ । तिज गीतहरुको नेपाली सांगीतिक बजारमा छुट्टै प्रकारको चर्चा हुने गरेको छ । तिज गीतहरुले मौलिकता भुलेको, अश्लिल भाषा शैलिको प्रयोग भएको, ३/४ महिना अगाडि देखिनै गीत युट्युव तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको आरोप कलाकारहरुलाई लाग्ने गरेको छ। यसपटक...
र्‍यापर एलिश नेपकिङको ‘जे पनि चल्छ’ (भिडियो)
काठमाडौं । चर्चित र्&zwj;यापर एलिश नेपकिङले फरक शैलीमा तयार भएको &lsquo;जे पनि चल्छ, जहाँ पनि चल्छ&rsquo; बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ग्याङ्गस्टर र्&zwj;यापको नाम दिएका उनले यस गीतलाई आफ्नै अफिसियल युट्यूव च्यानलमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् । र्&zwj;यापर एलिशले नेपालमा ग्याङ्गस्टर र्&zwj;यापको परिभाषा फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजेको बताएका छन्...
प्रकाश सुवेदीलाई नायिका केकी अधिकारीले भनिन्-‘अति गरे क्षति हुन्छ’
काठमाडौं &ndash; नायिका केकी अधिकारीले टेलिभिजन कार्यक्रम &lsquo;रजतपट&rsquo;का प्रस्तोताले तीन दशकदेखि अप्रासांगिक बखान गर्दै नेपाली महिला कलाकारको शारीरिक बनावटमाथि छुद्र टिप्पणी गरेको बताएकी छन्। ६ अगस्टमा एपी वान टेलिभिजनमा प्रशारण भएको कार्यक्रम &lsquo;रजटपट&rsquo; मा कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले नायिकाहरुलाई &lsquo;दुई दिनको चन्द्रमा, अनि औँसीको रात&rsquo; भनेर नायिकाहरुलाई फूर्ति नदेखाउन भन्दै कार्यक्रम...
पुजा शर्मालाई 'दारे महानायिका' भन्दै अपमानित गर्ने प्रकाश सुवेदीले मागे माफी
काठमाडौं &ndash; अभिनेत्रीप्रति लक्षित गरेर टेलिभिजन कार्यक्रममा आपत्तिजनक भाषा र त्यस्तै प्रस्तुतिका कारण विवादमा आएका चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदीले माफी मागेका छन्। कार्यक्रम रजतपटमा बोलेको कुराले आलोचनाको केन्द्रमा आएका उनले माफी पनि कार्यक्रम मार्फत नै माग्ने बताएका भए पनि त्यसो नगरी विशेष भिडियो बनाएर माफी मागेका हुन्। एपी वान टेलिभिजनमा प्रशारण हुने...
प्रकाश सुवेदीले ‘दाह्रा निस्केकी महानायिका भनेपछि नायिका पुजा शर्माले भनिन्- 'कति चुप रहने ? कति सहने ?'
काठमाडौं &ndash; कलाकार पूजा शर्माले केही समयअघि एक अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालमा &lsquo;१४ जिल्ला र ७२ प्रदेश रहेको&rsquo; बताइन् । उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भयो । चर्चित कलाकारलाई यति सामान्य ज्ञानसमेत नभएको भन्दै उनको विरोध भयो । पूजाका फ्यान पनि भड्किए । पूजाले पनि यो विषयमा आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार्दै कुनै प्रतिक्रिया...
प्रकाश सुवेदीमाथी अभिनेत्री ऋचा शर्माको हमला : 'रजतपट मैलो भयो,शायद फेर्ने बेला आयो'
काठमाडौँ &ndash; &lsquo;मैले बुझेको रजतपटको अर्थ&ndash;चलचित्र घरको पर्दा हो । तर हिजोआज मैलो हुँदै गएको छ, शायद धुने बेला आएको छ, शायद फेर्ने बेला आएको छ ।&rsquo; अभिनेत्री ऋचा शर्माले चलचित्र क्षेत्रमा हुँदै आएको भद्धा आक्रमण र &lsquo;अश्लिल&rsquo; प्रस्तुतिप्रति गरेको टिप्पणी हो यो । हालै चलचित्र सम्बन्धी टेलिजिभन कार्यक्रम &lsquo;रजतपट अंकल&rsquo; का...
वासिङ्टन &ndash; अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ नागरिकको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय भिडियो सेयर एप्लिकेसन टिकटक अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गर्न छ हप्ताको समयावधि दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरेलगत्तै माइक्रोसफ्ट समेतका कम्पनीहरु अहिले टिकटक खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् ।&nbsp; ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय उठाउँदै...
काठमाडौं &ndash; पछिल्लो समय नेपाली गीत संगीतमा उच्छृङ्खल शब्द र दृश्य अर्थात भिडियोले नेपाली संगीत क्षेत्रमाथी थुप्रै प्रश्नहरु उठाइरहेको छ । विभिन्न पर्वका नाममा होस् वा अन्य समयमा पनि गीत संगीतलाई सांस्कृतिक तवरमा भन्दा पनि भाइरल बन्ने प्रवृतीले गाजिरहेको अवस्था छ । राम्रा गीतकार , संगीकार नभएका होइन,संस्कृती जोगाउने,समाज बदल्ने...
साक्षीका बोल्ड तस्बिर भाइरल
काठमाडौं - साक्षी चोपडाले फेरि एकपटक आफ्ना बोल्ड तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । टपलेस साक्षीले सेल्फी लिँदै गरेको फोटो निकै बोल्ड देखिएको छ । साक्षीका ती तस्बिरहरुले थुप्रै प्रतिक्रियाहरु पनि पाइरहेका छन् । समय समयमा आफ्ना बोल्ड तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आएका कारण उनको चर्चा हुने गरेको छ । भारतमा पनि कोरोना भाइरसको त्रास...
हरिवंशको गाइजात्रा गीत ‘तिमी के को जान्ने ?’
कलाकार हरिवंश आचार्यले तिमी के को जान्ने&rsquo; बोलको गाइजात्रा गीत सार्वजनिक गरेका छन् । हरिवंशकै शब्द, स्वर तथा संगीतमा तयार भएको यो गीतले देशको समसामयिक बिषयमा ब्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ । गायक आचार्यको यो गीतले शक्तिमा रहेको एक नेताको चाँकडी कसरी गरिन्छ र उसले आफूलाई कसरी देवत्वकरण गरिरहेको छ भन्ने...
दया सँग निराञ्जलीको नृत्य ! (भिडियो)
दिपा लामा र तेम्बा शेर्पाको आवाजमा समावेश &lsquo;बल्ल बल्ल भेट भो&rsquo; बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ । दिपक शर्माको यो गीतमा शब्द तथा संगीत छ । भिडियोमा नायक दयाहाङ राईको साथमा मोडल निरञ्जली लामा, क्षितिज सुवेदीको अभिनय छ । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोमा सुदिप बरालको छायांकन छ । ध्रुवराज...
यी ५ नायिका जसले चलचित्रकर्मीलाईनै आफ्नो जोडी बनाए
एजेन्सी - चलचित्र क्षेत्रमा धेरै यस्ता नायिकाहरु छन्,जसले रिल लाइफमा मात्र नभएर रियल लाइफमै चलचित्रकर्मीलाई आफ्नो जोडी बनाएका छन् । हामी यी ५ नायिकाका रियल जोडीको चर्चा गर्दैछौँ । दिपिका प्रसाईँ र दिवाकर भट्टराई&ndash; चलचित्र वृत्तको अर्को रियल जोडी हुन् नायिका दिपिका प्रसाईँ र निर्देशक दिवाकर भट्टराई । उनीहरुले केही समय...
चर्चित बलिउड अभिनेत्री प्रियंका र दिपिका यस्तो गम्भीर प्रकरणमा संलग्न,प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने
काठमाडौं - दुई चर्चित बलिउड अभिनेत्रीहरु गम्भीर प्रकरणमा फसेका छन् । भारत महाराष्ट्रको मुम्बई प्रहरीले बलिउडका चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोणलाई बोलाउने बताएको छ । उनीहरुमाथि सामाजिक सञ्जालमा नक्कली फ्यान बनाएको आरोप लगाइएको छ । विभिन्न संगठनहरूले गरेको अनसन्धानमा नक्कली फ्यान अर्थात फलोअर्स भएका सेलिब्रेटीमा पादुकोण र चोपड़ा शीर्ष...
तृष्णा गुरुङले ल्याइन् नयाँ गीत आघुमै सालै त...(भिडियो)
खानी हो यामु हे कान्छा गीतबाट चर्चा कमाएकी गायिका तृष्णा गुरुङको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। गीतको शब्दले भन्छ आघुमै सालै त भेट हाम्रो होला । सारंगीको मधुर धुनसँगै सुरु हुने यो गीतले सँगै हुन नपाएका दुई प्रेमीको मिलन चाँडै हुने आशाको कुरा गर्छ। आघुमै सालै तु कलकली बग्छ आधीँ खोला,...
नायिका विजयलक्ष्मीद्वारा आत्महत्याको प्रयास, अस्पतालमा भर्ना
काठमाडौं - साउथ इन्डियन नायिका विजयलक्ष्मीले मानसिक तनावका कारण आत्महत्याको कोसिस गरेकी छिन् तर उनको ज्यान भने बचेको छ । विजयलक्ष्मीले यसअघि सोसल मिडियामा थुप्रै भिडियो सेयर गरेकी थिइन् जसमा उनले सोसल मिडियाको सहारामा अत्यधिक पीडा दिइएको जानकारी दिएकी थिइन् । उनको हाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । फेसबुकमा भिडियो बनाएर...
टिकटकमा फलो गर्ने,साथी बन्ने अनि डिभी परेको छ भनेर युवक फसाउने!
काठमाडौं - टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सन्जालमा युवाहरुलाई फलो गरेर पछि नजिक हुने र अमेरिकाको डिभी परेको छ भनेर प्रलोभन बाँड्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना युवती पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले २७ वर्षीया कोपिला शर्मा र १९ वर्षीया अमिशा केसीलाई पक्राउ गरेको हो। दुवै जना बाग्लुङको काठेगाउँपालिका २...
दुनियाँलाई पनि तिमी अरूको नजरबाट हेर भन्दै आईन प्रियंका (भिडियोसहित)
काठमाडौं&nbsp; - सपनाहरू प्रिय हुन्छन्, सुन्दर र लोभलाग्दा हुन्छन् तर ती केवल सपना हुन् । सपना देख्दैमा ती पूरा हुँदैनन् । त्यसका लागि त तपाईंले कठिन अभ्यास गर्नुपर्छ । यति कठिन जसले परिवर्तन ल्याओस् । त्यसैले कर्मवान् हुनुहोस्, स्वप्नदर्शी होइन । माथिका शब्दको भाव अनुसारको गीत संसार फेर्ने लिएर गायिका रानी...
यी हुन् २०२० का ‘टप १०’ बिश्व सुन्दरी [फोटो फिचर]
सुन्दरताको परिभाषा दिन निकै कठिन छ । हरेक व्यक्तिका लागि सुन्दरताको परिभाषा फरक हुन सक्छ । सुन्दरताको न कुनै खास अर्थ हुन्छ, न त यसलाई सीमाभित्र नै राखेर हेर्न सकिन्छ। सुन्दरतासम्बन्धी केही मानक दृष्टिकोण बनाएर यसबारे अध्ययन, अवलोकन गर्न सकिन्छ। संसारमा बेलाबखत् सुन्दरतासम्बन्धी विभिन्न प्रतियोगिताहरु पनि हुँदै आएका छन्। सुन्दरताको विषयमा संसारभर...
मुम्बई &ndash; अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याको विषयलाई लिएर प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको छ । उनले गत १४ जुनमा मुम्बईस्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । उनको आत्महत्यापछि बलिउडमा नेपोटिज्मको विषयलाई लिएर व्यापक बहस भएको छ भने फ्यान पनि दुःखी भएका छन् । सुशान्तको आत्महत्यापछि भारतमा उनका फ्यानले आत्महत्या गरेको खबर बाहिरिएका...
राजु परियार र टिका पुनको स्वरमा तिज गीत ‘आँगनिमा’ सार्वजनिक (भिडियाे)
काठमाडौं । चर्चित गायक&divide;गायीका राजु परियार, टिका पुन, प्रभावन जे, गीता देवी, माही बडु र बाल गायक कौशल बलायर को स्वरमा तिज गीत &lsquo;आँगनिमा&rsquo; सार्वजनिक भएको छ । डिएआर मुभिजको निर्माणमा कलसी रोकायाको प्रस्तुति कौशल बलायरको तिज गीत &lsquo;आँगनिमा&rsquo; मा शब्द तथा लय कलशी रोकायाको रहेको । पाशर्व स्वर स्मृति शाही,...
सडकमा निर्वस्त्र भएर प्रर्दशन गर्ने युवती ‘नेकेड एथेना(भिडियो हेर्नुहोस्)
एजेन्सी &ndash; सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक युवतीको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ । यो अमेरिकाको पश्चिम तटीय सहर पोर्टल्यान्डमा शनिबार राति करिव १ः४५ बजे भएको प्रदर्शनको क्रममा खिचिएको दृश्य हो । प्रद्धर्शनकाबीच सडकमा एक्लै सुरक्षाकर्मीको सामना गर्न तयार ती युवतीले सबैको ध्यान आफुतिर खिचेकी थिइन् । सबैको ध्यान आफुतिर तानिनुमा एक कारण...
अभिनेता राजेश हमालका भाइ राकेश हमालको निधन
काठमाडौं &ndash; अभिनेता राजेश हमालका भाइ राकेश हमालको निधन भएको छ । उनको उपचारका क्रममा बुधवार (आज) निधन भएको हो । हमालका भिनाजु खगेन्द्र जिसीले राकेशको निधन भएको पुष्टि गरे । राकेश केही समययता बिरामी थिए । उनको कलेजो प्रत्यारोपणका क्रममा भारतको दिल्लीस्थित उपचार भइरहेको थियो । ...
“अबको तिज नो ब्रत प्लिज” विवादमा
गायिका सोफिया थापाले गाएको &lsquo;अबको तिज नो ब्रत प्लिज&rsquo; बोलको तिज गीत विवादमा परेको छ । यूट्युबमा सार्वजनिक भएलगत्तै यस गीतले चर्को प्रतिक्रिया सामना गर्नुपरेको हो । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तिज नजिकिँदै जाँदा दिन&ndash;दिनै नयाँ तिजगीतहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही सिलसिलामा गायिका सोफिया थापाको &lsquo;तिजगीत&rsquo; हाइलाइट्स नेपालको च्यानलबाट यूट्यूवमा...
बद्रीले ल्याए ‘सेनिटाइजर घसेर, शंकर र अञ्जलीको धमका(भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौं &ndash; गायक बद्री पंगेनीले तीजको गीत बजारमा ल्याएका छन् । &lsquo;सेनिटाइजर घसेर&rsquo; बोलको गीत मंगलबार (आज) युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोना भाइरसका कारण माइत जाने अवस्था नभएको भाव गीतमा प्रस्तुत गरिएको छ । गीतका शब्द रविन लामिछानेले लेखेका हुन् । गीतमा बद्री पंगेनी र कविता अर्यालको स्वर छ भने गायक...
सिर्जनात्मक बहसभन्दा वाहियात फण्डामा रंगमञ्च
काठमाडौं &ndash; लकडाउनका बेला फिल्म क्षेत्र कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर फिल्मकर्मी तथा कलाकारबीच बहस हुनेछ भन्नेमा धेरैले अनुमान गरेका थिए । नेपाली फिल्म राम्रा हुँदैनन् भनेर दर्शक तथा समीक्षकले भन्दै आएका छन् । मेकरले फिल्मको स्तरीयतामा जोड दिने र कलाकारले आफ्नो अभिनयमा सुधार गर्नेछन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । किनकि,...
अभिनेता अनुपम खेरको परिवारका ४ जनामा पनि कोरोना पोजेटिभ
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता अनुपम खेरको परिवारका चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । अनुपम खेरले आईतवार एक ट्वीट मार्फत आफ्नो परिवारका आमा दुलारी सनेत चार जनालाई कोरोना संक्रमण भएको जानकार दिएका थिए । साथै उनले एक भिडियो पनि सोसल मिडियामा शेयर गरेका छन् । उनकी आमा दुलारी आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत...
रङ्गक्षेत्रमा विवाद फन्डा : बर्षाले लेखिन्- ‘एक दुई दिन देखि सुन्ने भयो,इन्टरटेनमेन्ट प्लिज !!
काठमाडौं - कलाकारहरु धमाधम विवादमा मुछिन थालेका छन् । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले भुवन केसीमाथि र्दुव्यवहारको आरोप लगाएकी छिन् । यो अझै सेलाएको छैन । चलचित्रको सुटिङ चलेको छैन । कलाकारहरु र्फुसदिला छन् । यस्तो बेलामा अनेकन फन्डा निस्किदैछ । पछिल्लो समय दिपाश्री निरौलाले राजेश हमाल किन महानायक भनी प्रश्न गरेकी छिन्...
यी बलिउड सुपरस्टार जो अभिनय बाहेक अन्य धन्दामा पनि संलग्न
एजेन्सी-बलिउडमा चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै कलाकारहरु छन् जसका अभिनय बाहेक कुनै अर्को व्यवसाय या धन्दामा संलग्न छन्। उनीहरु आफ्नो अभिनयको साथ साथै आफ्नो साइड बिजनेसमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छन्।आज हामी बलिउडका १० कलाकारहरुका बारेमा चर्चा गर्न गईरहेका छौं । जसले अभिनयको दुनियाँ बाहेक अलग अलग बिजनेसमा पनि हात हालेका...
सन्दीप क्षेत्रीमाथी पर्यो फसाद : मधेशी समुदायको अपमान गरेको भन्दै टेकुमा उजुरी
काठमाडौं &ndash; कमेडियन तथा कलाकार सन्दीप क्षेत्रीले मधेशी समुदायको अपमान गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । वीरगञ्जका अशोक कुमार कुशवाहाले महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा हुलाकमामार्फत बुधवार उजुरी पठाएका हुन् । उजुरीमा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री साथै मधेशी समुदायप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र मधेशी र पहाडी सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई...
उदित नारायण र कुमार सानुले छोडे सारेगम शो
काठमाडौ - कोरोना भाइरसको कारण भारतमा धारावाहिक र रियालिटी शोका सुटिङ बन्द भएका थिए । लकडाउन खुकुलो गरेसँगै नयाँ गाइडलाइन्स अनुसार पुनः सुटिङ सुरु भइरहेका छन् । सिंगीग शो सारेगमप लिटिल चेम्समा अब जर्जको रुपमा उदित नारायण र कुमार सानुलाई देख्न नपाइने भएको छ उनीहरुको स्थानमा रेशमिया र जावेद अली...
कसैलाई छुने,चुम्बन गर्ने, तान्ने व्यवहार शारीरिक दुर्व्यवहार हो,शैह्य हुँदैन : स्वस्तिमा
काठमाडौं &ndash; नायिका स्वस्तिमा खड्काले निर्माता तथा निर्देशक युवराज लामाको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा एक स्टाटस लेख्दै लामाको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । निर्मातासमेत रहेका युवराज लामाले अभिनेता भुवन केसीलाई समर्थन गर्दै कसैले अंकमाल गर्&zwj;यो, गाला छायो भनेर रुनुको अर्थ नभएको बताएका...
एलिना चौहान, समीक्षा अधिकारी, रचना रिमालको स्वरमा &lsquo;आयौं चेली&rsquo; बोलको तीज गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । दीपक शर्माको संगीत रहेको गीतमा घनश्याम ओलीको शब्द छ। यो तीज गीतको भिडियोमा अल्का सुवेदी, सुकृति उप्रेती, उत्साह घिमिरेको मोडलिङ छ । सरोज ओलीको निर्देशनमा बनेको यो भिडियोमा नवराज उप्रेतीको छायांकन, अमन मानन्धरको सम्पादन...
किन विवादमा पर्यो दुर्गेशको ‘बीच्च बीच्चमा २ ’ गीत पनि
पोखरा । गत वर्ष &lsquo;हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच्चबीच्चमा&rsquo; नामक तीज गीत ल्याएर चर्चामा आएका गायक दुर्गेश थापा पछि &lsquo;ह्याप्पी तिहार&rsquo; भन्दै झन् चर्चामा आए । गीतमा प्रयोग भएको शब्दमा आपत्ती जनाउँदै उनीमाथि उजुरी नै पर्यो । यस वर्ष पनि उनले तीजलाई लक्षित गरी नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । आफ्नै युटुब...
कोरोनाका कारण अभिनेता कोर्डेरोको निधन
न्यूयोर्क &ndash; क्यानेडियन कलाकार तथा रंगकर्मी निक कोर्डेरोको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन भएको छ । ३ महिनाअघि अस्पताल भर्ना गरिएका निकको आइतबार निधन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । ४१ वर्षीय निकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको लस एन्जल्सको एक अस्पतालमा निधन भएको जनाइएको छ...
गायकको मृत्युसम्बन्धी विवादमा झडपहुँदा ११ सुरक्षाकर्मी सहित कम्तीमा १६६ जनाको मृत्यु
अदिस अबाबा &ndash; इथियोपियाली लोकप्रिय गायकको मृत्युका विषयमा भएको विवाद हिंसात्मक भडपमा परिणत हुँदा इथियोपियाको ओरोमिया क्षेत्र र राजधानी अदिस अबाबामा कम्तीमा १६६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतहरूले आइतबार जानकारी गराएका छन् । अरोमिया क्षेत्रका प्रहरी उप&ndash;आयुक्त गिरमा गेलमले झडपमा कम्तीमा १५६ सर्वसाधारण र ११ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको शनिबार राति सञ्चारमाध्यमहरूलाई...
दुर्गेशले ल्याए ‘बीच्च बीच्चमा २ (भिडियो हेनुहोस्)
काठमाडौं &ndash; गायक दुर्गेश थापाले नयाँ तीजको गीत बजारमा ल्याएका छन् । उनले युट्युबमार्फत &lsquo;बीचबीचमा २&rsquo; बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष दुर्गेशले &lsquo;हामी पनि नाच्नुपर्छ बीचबीचमा&rsquo; बोलको गीतमा सार्वजनिक गरेर वर्षभरि नै चर्चा कमाएका थिए । उक्त गीत सामाजिक सञ्जालमा पनि खुबै चर्चित बनेको थियो । यसपटकको गीत भने केही...
अभिनेता भुवनमाथी अर्को आरोप,स्वेताले पनि खोलीन पोल, ‘स्कृन सट’ सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं - फिल्म निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीलाई फेरी अर्की महिलाले पनि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएकी छन् । उनले भुवन केसीले आफुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनी स्वेता रेग्मी हुन् । स्वेताले भुवनले आफुलाई पनि सामाजिक सञ्जाल फेसवुक च्याटमा कुरा गर्दै अपशब्द...
टिकटिक बनाउँदा कपडानै खोलेपछि भाइरल( भिडियो हेर्नुस्)
टिकटिक बनाउँदा कपडानै खोलेपछि भाइरल( भिडियो हेर्नुस्) ...
काठमाडौं&ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको निधन पछि बलिउडमा अहिले तरंग छाएको छ । उनको निधन पछि बलिउडमा परिवारवादको विषय चर्को रुपमा उठेको छ । बलिउडमा भएको परिवारवादका कारण सुशान्तले देह त्याग गर्न बाध्य भएको भन्दै सोही अनुसार प्रहरीले छानविन अगाडी बढाएको छ । प्रहरीले दर्जनौंसंग वयान लिइसकेको छ । यसैबीच प्रहरीले...
दुर्गेश थापाको “बिच्च बिचमा २” सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं&ndash; चर्चित मोडेल तथा गायक दुर्गेश थापाले नयाँ गीत बजारमा लिएर आएका छन् । गतबर्ष तीतको लागि थापाले गाएको &ldquo;बिच बिचमा&rdquo; बोलको गीतले सर्वाधिक चर्चा बटुल्न सफल भएपछि, यो बर्ष बिच बिचमा भाग २ &ldquo;एउटा फोटो खिच&rdquo; दुर्गेश थापा युट्युब च्यानलबाट भर्खरै सार्वजनिक गरिएको छ ।कोरोना महामारी र लकडाउनको बन्दा...
कलाकार संघमा निवेदन दिँदै केसीले भने– ‘साम्राज्ञीले मनगढन्ते कुरा गरेर मेरो चरित्रहत्या गरिन्’
काठमाडौं&ndash; अभिनेता भुवन केसीले नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले आफूमाथि नभएको आरोप लगाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै चलचित्र कलाकार संघमा निवेदन दिएका छन् । केही हप्तादेखि लगातार रूपमा नायिका शाहले युट्युब&sbquo; इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालमा मनगढन्ते कुरा गर्दै आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्। केसीले निवेदनमा साम्राज्ञीले आफूविरूद्ध विभिन्न आक्षेप/आरोपहरू लगाई...
सुशान्तको मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्ट सार्वजनिकः देहत्यागअघि गुलगमा गरेका थिए यस्तो सर्च
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आत्मह त्याको विषयमा प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको छ । हालै उनको मोबाइलको प्राथमिक फोरेन्सिक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । जीन्यूज इन्डियाका अनुसार सुशान्तले १४ जूनमा आ त्मह त्या गर्नुअघि करिब सवा १० बजे आफ्नो मोबाइलको गुगल सर्च इन्जिनमा आफ्नै नाम सर्च गरेका थिए ।उनले मोबाइलको सर्च हिस्ट्रिमा...
राजेश हमाल महानायक नभएको भन्दै दीपाश्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध भएपछि मागिन् माफी
काठमाडौं &ndash; हास्यकलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले केही समयअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी मागेकी छिन् । आफूले दिएको अन्तर्वार्ताको एक अंशका कारण सामाजिक सञ्जालमा विवादित बनेपछि उनले माफी मागेकी हुन् । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा दीपाश्रीले राजेश हमाल महानायक नभएको बुझिने गरी जवाफ फर्काएकी थिइन् । पत्रकारले हमाललाई महानायक बनाइदिएको उनले बताएकी...
यी नायिकाले फेसबुकमा दिइन् आत्महत्या गर्ने धम्की, जिम्मेवार को ?
भोजपुरी नायिका रानी चटर्जीले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्या गर्ने कुरा उठाएकी छिन्। उनले आफू डि(प्रेशनसँग जुधिरहेको र अब हिम्मत बाँकी नरहेको भन्दै आत्महत्याको कुरा उठाएकी हुन्। यी सबका लागि रानी चटर्जीले धनंजय सिंहका नामका व्यक्तिलाई जिम्मेवार देखाएकी छिन्। रानी चटर्जीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखिन्, &lsquo;डि(प्रेशनमा म असाध्यै धेरै डिस्टर्ब भइसकेकी छु।...
भुवनलाई साम्राज्ञीको जवाफ : गालामा टाँसिन आएर ‘तँ त मेरो प्रोडक्ट होस्’ भन्दै मिडियामा यस्ता कुरा बाहिर नल्याउन भन्ने?
काठमाडौं &ndash; नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफू दुर्व्यवहारमा परेको बताएकी छिन् । केही दिनअघि उनले ३ वटा नेपाली फिल्ममा काम गर्दा दुव्यर्वहारमा परेको बताएकी थिइन् । उनले फिल्मको नाम सार्वजनिक नगरे पनि निर्माताको नियतमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । फिल्म &lsquo;ड्रिम्स&rsquo; मा काम गर्दा नराम्रो व्यवहार भोगेको उनले सांकेतिक रुपमा भिडियोमार्फत बताएकी...
हाइप्रोफाइल बेली डान्सरलाई उत्तेजक भिडियो पोस्ट गरेको भन्दै ३ वर्ष ‘जेल’ साढे २२ लाख जरिवाना(भिडियो हेर्नुस्)
एजेन्सी - एक हाइप्रोफाइल बेली डान्सरले सामाजिक संजालमा उत्तेजक भिडियो पोस्ट गरेको अभियोगमा ३ वर्ष जेल र साढे २२ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएकी छिन् । मिश्रकी बेली डान्सर सामा एल मेसीलाई यहाँको अदालतले शनिबार ३ वर्ष जेल र ३ लाख इजिप्सियन पाउण्ड जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । अल जजीराका अनुसार...
मोडल दुर्गेश थापाको भाइरल तीज गीत बीच बिचमा–२ को सुटिङ्ग स्थलमा देखियो अचम्मको दृश्य,यस्तो बनेको छ गीत (हेरौ)
लोकप्रिय कलाकार दुर्गेश थापाको बिच्च बिच्चमा को भाग २ को भिडियो सुटिङ्ग भएको छ । चर्चित गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले नै मुख्य भूमिका बहन गरेका थापाले उक्त गीतमा चर्चित कलाकारहरुलाई अटाउन सफल भएको छ । गत बर्ष सर्बाधिक रुचाईएको बीच बीचमा १ पछि उनले यसलाई भाग २ मा ल्याउन...
टिकटकमा बेली डान्स पोस्ट गरेको आरोपमा ३ बर्ष जेल र १४ लाख जरिवाना
इजिप्टको एक उच्च प्रोफाइल बेली डान्सर साम एल्मा&ndash;सेले सामाजिक मीडियामा अनैतिक र भड़काउने भिडियोहरू पोष्ट गर्दा यसले ठूलो महसुस गर्&zwj;यो। काइरो अदालतले उनीहरुलाई दुर्व्यवहार र अनैतिक कामका लागि ३ वर्ष कैद र ३००,००० पाउण्ड (लगभग १.५ लाख रुपैयाँ) जरिवाना गरेको छ। अलमासी अप्रिलमा सोशल मीडियामा भिडियो र फोटोहरूको छानबिनको दौरान पक्राऊ...
अभिनेता वरुणले शेयर गरेको तस्विरमा तपसीले यस्तो कमेन्ट गरेपछि बनिन् ट्रोल
एजेन्सी&ndash; फिल्म &lsquo;स्टुडेन्ट अफ द इअर&rsquo;बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका चर्चित नायक हुन् वरुण धवन । उन यतिबेला फिल्म &lsquo;स्ट्रिट डान्सर&rsquo; को छायांकनमा व्यस्त रहेका छन् । उनले पहिलो फिल्मबाट नै आफ्नो करीयर शुरु गरेका हुन् । उनले अहिले सम्म धेरै चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् ।तर उनका फिल्म फ्लप भने भएका छैनन्...
जब नायिका पुजा शर्माले नेपालमा १४ जिल्ला छन् भनेपछि बनिन् ट्रोलको शिकार
काठमाडौं &ndash; कलाकार पूजा शर्मा ट्रोलको शिकार बनेकी छिन् । नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने समेत भन्न नसकेपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्राइम टाइम्सको भिडियो अन्तर्वार्तामा पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूजाले नेपालमा १४ जिल्ला भएको बताएकी थिइन् । उनलाई पत्रकार सुवेदीले सोधेका थिए &ndash; नेपालमा यतिखेर कतिवटा प्रदेश छन्...
फिल्म बनाउँनेहरु के सम्म गर्ने रहेछन्: साम्राज्ञीले आफुमाथी भएको सबै खुलाइन् ! (भिडियो)
काठमाडौ&ndash; नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफुले काम गरेका ८ मध्ये तीन वटा फिल्म ब्यानरबाट अति नै व्यवहार भोगेको बताएकी छिन् । तर उनले आफु माथि नराम्रो गर्ने फिल्म तीन ब्यानरका नाम भिडियोमा उल्लेख गरेकी छैनन् । &rsquo;१७ बर्षको उमेरमा चलचित्रमा डेव्यु गरें । त्यो बेला धेरैले हाम्रो क्षेत्र सानो छ...
स्वस्तिमाको सुन्दर लुक्स (तस्वीरमा हेर्नुहोस्)
यदि लकडाउन नहुँदो हो त, नायिका स्वस्तिमा खड्का कुनै फिल्मको शूटिङ या म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुन्थिन् । तर, लामो लकडाउनले कलाकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । नायिका स्वस्तिमा खड्काले शूटिङ मिस गरेको ३ महिना भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले शूटिङ याद गरेको बताउने गर्छिन् । हालै उनले एक तस्वीर शेयर गर्दै कामको...
१६ वर्षीया टिकटक स्टारले गरिन् आत्महत्या
मुम्बई &ndash; भारतमा एक टिकटक स्टारले आत्महत्या गरेकी छिन् । १६ वर्षीया सिया कक्करले बिहीवार आत्महत्या गरेकी हुन् । उनले किन आत्महत्या गरिन् भन्ने अझै खुलेको छैन । तर, लामो समयदेखि डिप्रेसनमा रहेको जनाइएको छ । दिल्लीमा बस्दै आएकी सिया टिकटकमा चर्चित थिइन् । सियाले दिल्लीको गीता कोलोनीस्थित आफ्नो घरमा राति ९...
किसिङ सिनले चर्चा कमाएका यी ९ फिल्म
काठमाडौं - कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीबाट हरेक फिल्म क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। भारतीय फिल्म उद्योग बलिउडमा समेत यसको प्रभाव परेको छ । तर अब बलिउडमा भारत सरकारले तय गरेको केहि गाइडलाइनलाई पालना गरेर फिल्म सुटिङ गर्न पाइने भएको छ । भारत सरकारले फिल्म सुटिङका क्रममा हरेक कलाकर्मीबीच सामाजिक दुरी हुनुपर्ने बताएको छ...
हट अवतारमा इलियाना(फोटो/भिडियो)
मुम्बई &ndash; अभिनेता इलियाना डिक्रुजले हालै एक तस्वीर शेयर गरेकी छिन् । तस्वीरमा उनलाई घाममा आनन्द लिएको देख्न सकिन्छ । उनले इन्स्टाग्राममार्फत बुमर्&zwj;याङ भिडियो शेयर गरेकी हुन् । इलियानाले तस्वीरमा क्याप्सन दिँदै लेखेकी छिन्, &lsquo;मेरो त्वचामा घामको आनन्द लिइरहेकी छु ।&rsquo; तस्वीरमा फ्यानले मन परेको भन्दै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । ...
अभिनेत्री शर्लिनका हट तस्बिर हेर्नुुहोस्
एजेन्सी&nbsp; -बलिउड अभिनेत्री एव्म मोडल शर्लिन चोपडा हट एव्म बोल्ड अभिनेत्रीका रुपमा परिचित छिन् । सामान्यतः उनलाई मोना चोपडाको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन । उनको रुप जिउढाललेनै उनका फ्यान उनका तस्बिर हेर्न लालयीत हुन्छन् । शर्लिनले लकडाउनको समयमा थरी थरीका पोजमा तस्विर सेयर गर्दै आएकी छिन् । ...
काठमाडौँ । फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जीन केसटेक्सले कोरोना महामारीको थप जोखिमलाइ मध्यनजर गर्दै कर्फ्यूको समयलाई बढाएका..